एकमुष्ट शिक्षण संस्था बन्द नगर्ने सरकारको नीति
Homeदेश / प्रदेशएकमुष्ट शिक्षण संस्था बन्द नगर्ने सरकारको नीति
कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै संक्रमणको दर पुन बढ्न थालेको छ। छिमेकी मुलुक भारतको संक्रमितको संख्या बढेसँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएन थालेको हो।
तर सरकारले भने एकमुष्ट रुपमा शिक्षण संस्था बन्द नगर्ने नीति लिएको छ। ‘अहिले एकमुष्ट रुपमा शिक्षण संस्था बन्द गर्ने सरकारको नीति छैन,’ भूमि व्यवस्था मन्त्री डा. शिवामाया तुम्बाहाम्फेले डिसी नेपालसँग भनिन्, ‘प्रभावित क्षेत्र हेरेर शिक्षण संस्था बन्द गर्ने वा खुलाउने भन्ने तय हुन्छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले देशभर थपिएका नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३६७ पुगेको जानकारी दिए। यसअघि शनिबार ३६३ जना सङ्क्रमित थपिएका थिए।